Fotodrafitrasa fototra goavana hampisandratra no notokonana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao Ambohipihaonana, Ihazolava ao atsimon’Ambatolampy, ny fotodrafitrasa mamokatra herinaratra azo avy amin’ny masoandro. Lafin-kevitra maro no azo tsoahina nandritra ny lahateny sy lanonana natao ny 23 jona teo. Telo no avoitra etoana.
“Afaka mirehareha isika” hoy ny filoham-pirenena nandritra ny kabary nataony. Ho azy dia tokony hirehareha ny Malagasy satria izao fotodrafitrasa mpamokatra herinatra azo avy amin’ny masoandro izao no fotodrafitrasa goavana indrindra eto amin’ny faritra Ranomasimbe Indiana. Afaka mirehareha ihany koa satria manomboka izao dia tsy nofinofy intsony ny fampiasana angovo azo havaozina araka ny lahateny nataon’i Hery Rajaonarimampianina.
Tsiahivina fa mamokatra 20 MW isan’andro ny fotodrafitrasa vao notokanana io. Ary ny fisian’ny fiaraha-miasan’ny tsy miankina sy ny fanjakana (PPP) no nahafahana nanatontosa azy. Ny volana desambra 2016 no napetraka ny vato fehizoro ary io tontosa io ny asa. Lafin-kevitra voalohany asongadina io.
“Tsy mivarotra fatiantoka intsony ny Jirama” hoy ny filoha nandritra ny fanazavany. Nambaran’ny Filoha fa ampy izay ny fitsentsenfana ny volam-bahoaka. Nohazavain’ny Filoha fa hatramin’izay dia nivarotra fatiantoka ny Jirama satria 1000 ariary ny sandan’ny famokarana ny 1 kWh izay hamidy 640 ariary amin’ny mpanjifa miteraka fatiantoka 360 ariary isaky ny 1 kwh izany. Nandritra ny taona maro dia ny volam-bahoaka no hanentsenana ny banga. Nisy ny nanan-karem-be tamin’izany. Manomboka izao kosa amin’ny alalan’ity fotodrafitrasa vaovao ity dia 480 ariary ny sandan’ny famokarana izay hamidy amin’ny 640 ariary tahaka ny teo aloha ihany. “Mampilaza an’ireo zatra nanararaotra aho fa tsy miverin-dalana intsony izao fanapahan-kevitra izao” hoy Rajaonarimampianina. Lafin-kevitra faharoa io.
“Fanovana toe-tsaina sy fiaraha-miasa no hahombiazana” hoy ny Filoham-pirenena. Isan’ny teny famerimberin’ny Filoha Rajaonarimampianina hatramin’ny volana janoary no mankaty rehefa mandray fitenenana imasom-bahoaka izy ny filazana fa mila fanovana toe-tsaina ny fanarenana ny Firenena. Tany Ambohipihaonana dia nanentana ny rehetra sy ny tsirairay hanaiky izany fanovana toe-taina izany ny filoha. Tany Ambohipihaonana ihany koa dia namory ireo perlemantera sy ny mpikambana amin’ny goverinemanta iombonana na marimaritra iraisana ary dia nanentana azy ireo ny filoha fa ny fiaraha-miasa no ahombiazana hahatanteraka ny fisandratan’ny firenena.
Satria kabary tsy novaliana no nataon’ny Filoham-pirenena tany Ambohipihaonana dia hitondrana fanamarihana vitsivitsy etoana ireo lafin-kevitra navoitra ireo. Nahoana tokoa no any amin’ny faritra malaza mamanara no napetraka ny fotodrafitrasa miankina amin’ny masoandro fa tsy tany Maevatanana ohatra izay malaza ho mandoro na toeran-kafa toy ny any Atsimo ? Faharoa, ny Filoham-pirenena dia nampitandrina an’ireo zatra nanararaotra teo aloha koa miandry ny famoahana ny anaran’ireo zatra nanararaotra reo ary ny vahoaka. Nymangarahara dia antoka iray mampisandratra. Herezina ny Filoha hiroso amin’ny ampamoaka fa azo antoka fa handrisika ny vahoaka ny fahafantarana ny anaran’ireo nitsensitra ny volam-bahoaka sy ny firosoana amin’ny famaizana mafy azy ireo.